Sajhasabal.com | Homeयौनसम्पर्कमा रुचि नै नभएका कारण श्रीमतीसँग बेलाबेलामा भनाभन पनि हुने गर्छ
म ४० वर्षीय विवाहित पुरुष हुँ । मेरी श्रीमतीको उमेर ३५ वर्ष छ । मलाई यौनसम्पर्कमा खासै रुचि हुँदैन । यौनसम्पर्क गर्न खोज्दा लिंग उत्तेजित हुँदैन । सुरुमै यौनसम्पर्क गर्न सक्दिनँ भन्ने लाग्छ । तर, निदाएका बेला मेरो लिंग उत्तेजित भइरहेको निद्राबाट बिउँझिँदा थाहा लाग्छ । यौनसम्पर्कमा रुचि नै नभएका कारण श्रीमतीसँग बेलाबेलामा भनाभन पनि हुने गर्छ । श्रीमती मलाई बाहिर सम्पर्क राखेको शंका गर्छिन् । तर, मलाई भित्रैदेखि यौनसम्पर्क गर्ने इच्छा हुँदैन । मानसिक समस्याका कारण पनि यौन इच्छामा कमी आउँछ भन्ने सुनेको छु । मेरो समस्या कसरी समाधान होला ? -बी.
यौन उत्तेजना नहुने समस्याको उपचारका लागि मुख्य गरी सदस्यको डर चिन्ता निवारण गर्ने व्यावहारिक चिकित्सा प्रभावकारी हुन्छ । पुरुषका समस्यामा विभिन्न औषधि दक्ष चिकित्सकको सिफारिसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । -शुक्रबारबाट